Waxay u tageen Muqdisho “Cadaadis iyo cidhiidhi kaga yimid Qaramada Midoobey iyo caalamka” | Baligubadlemedia.com
Waxay u tageen Muqdisho “Cadaadis iyo cidhiidhi kaga yimid Qaramada Midoobey iyo caalamka”
Madaxweynayaasha maamullada Jubbaland iyo Puntland ayaa lagu wadaa in maanta ay kulan rasmi ah la yeeshaan madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si xal looga gaaro nooca doorasho ee uu dalka aadayo dabayaaqada sannadkan iyo bilowga sanadka soo socda.
Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay casho loogu sameeyay madaxtooyada Villa Somalia, waxaana ka horreeyay kulamo ay shalay gelinkii dambe la qaateen xubno ka tirsan beesha caalamka.
Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka faalooda arimaha Afrika ayaa BBC-da u sheegay in waxyaabaha ay ka wadahadli doonaan madaxda ay ka mid tahay sidii loo dhisi lahaa dowlad marka uu dhammaado muddo xileedka hadda.
“In horta dowlad la soo dhiso lagama maarmaan weeye oo xitaa dowlad aan kumeel gaar aheyn in meesha ay iska joogto waa sharci darro. waxyaabaha ay ku adkeysanayeen weeyaan Deni iyo Axmed, waana lagama maarmaan in dowladi ay jirto,” ayuu yiri Prof Cabdi Ismaaciil Samatar.
“In meeshaas uu ka soo baxo heshiis dambe oo dib loo lafagurayo wixii lagu heshiiyay shirkii Dhuusamareeb ee ay ka maqnaayeen.”
Wuxuu sidoo kale sheegay in Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ay tageen Muqdisho ka dib cadaadis uga yimid Qaramada Midoobey iyo beesha caalamka.
“Waxaan is leeyahay waxay u tageen xoog iyo ciriiri kaga yimid Qaramada Midoobey iyo kuwan la dhaho caalamka, si gaar ah in ay kusii horreeyaan Xalane. Qoladaa dibadda ka socota ee Qaramada Midoobey iyo caalamka, xoog badana waxay saareen kuwa Xamar jooga, marka labadii qolo waa la fajaasay taas ayaa keenta in ay isku yimaadaan”.
Axmed Madoobe iyo Deni oo Muqdisho kula kulmay wakiilo ka socday beesha caalamka
Dhawaan ayay aheyd markii Maamullada Puntland iyo Jubbalnd ay ka hor yimaaddeen ayna qaaddaceen qodobbadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb-3 .
“Dhuusamareeb-3 waxay aheyd inay joogaan, ma aanay joogin, marka waxay iska aheyd tii ka soo baxday Dhuusamareeb-tii 3-aad mid bilaa sharci ah oo waxaan loo dhameyn ayaa lagu soo bandhigtay meesha taasina waxay waranka ku taageysa in dadka meesha isugu yimid in badan aanay umadda kalsooni ka wadan,” ayuu yiri Cabdi Ismaaciil Samatar.
“Dowladdaha Jubbaland iyo Puntland, waxay iyagoo ixtiraamaya aragtida ka qeyb galayaasha caddeynayaan in qodobada qoraalkii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 19 August 2020 ee ku aadanaa soo jeedinta hannaanka doorashada dalka ay tahay aragti ku kooban Madaxdii ka qeyb gashay Shirka oo ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed”, ayaa lagu sheegay war saxafaadeed dhawaan kasoo baxay Puntland iyo Jubbaland.
Madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa kulan la qaatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, waxay ka wadahadleen sidii heshiis looga gaari lahaa arrimaha doorashada.
Sababa “la isugu khilaafay shirkii Dhuusamareeb-3”
Madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa ku sugan Shirka Dhuusamareeb 3
Arrimo dhowr ah ayaa loo aaneynayaa inay sabab u yihiin khilaafka hareeyay shirka saddexaad ee Dhuusamareeb, oo ah mid horay loogu ballansanaa balse aysan ka qeybgalin Deni iyo Madoobe.
Mid ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee saldhigga u ah ismaan-dhaafka hareeyay shirka Dhuusamareeb ayaa lagu tilmaamay go’aankii meesha looga saaray xukuumaddii uu Ra’iisul Wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Kheyre, taasoo lasoo billaabatay hannaanka shirka wadatashiga.
War-saxaafadeed 16-kii bishii la soo dhaafay ay soo saartay Puntland ayaa u muuqday mid ay ku qaaddaceen wajiga saddexaad ee Shirka Dhuusamareeb, oo furmay.
“Hirgalin la’aanta qodobbadii lagu heshiiyay” Dhuusamareeb-2
“Ku xad gudubka matalaadda Aqalka Sare”
Maalmihii la soo dhaafay waxaa soo ifbaxay warar sheegaya in guddoonka Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka cadhooday hadal uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka horjeediyay golaha Shacabka, kaasoo uu ku sheegay “in iyagu ay dalka matalaan”.